Talooyinka Suuqgeynta Fasaxa ee Tafaariiqda iyo Ganacsiga | Martech Zone
Talooyinka Suuqgeynta Fasaxa ee Tafaariiqda iyo Ganacsiga
Arbacada, Nofeembar 11, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Layaab ma leh in 78% dadka wax iibsanaya ay baaritaan ku sameyn doonaan iibsigooda soo socda ee internetka, laakiin waxa layaab leh intee in le'eg oo tafaariiqleyaal iyo shirkado ganacsi sameeya ayaa ka tagaya joogitaankooda internetka ee isla'egta. Mid ka mid ah walxahaas maqan waa Pinterest - the taasoo keentay shabakadaha bulshada ee loogu talagalay dhiirigelinta hadiyadda
15-kii sano ee la soo dhaafay, 75% koritaanka tafaariiqda soo maray iibinta internetka. In kasta oo iibka intiisii ​​badnayd ay wali ka dhacaan dukaamada lebenka & hoobiyaasha, shaki kuma jiro sida tikniyoolajiyaddu u saamaynayso koritaanka iibka. Laga soo bilaabo korsashada tiknoolajiyada dukaanka illaa khadka tooska ah, guursashada labada khibradood oo aan muuqan ayaa fure u ah kobcinta iibka
Lauren Jung ee Shelf waxay siisay furayaashan 3 si kor loogu qaado iibka suuqgeynta fasaxa:
Bilow bilawga - Dadku wax bay wax ka iibsanayaan waqti hore sidii hore. Sanadkii la soo dhaafay, noocyo badan ayaa helay taraafiko yar iyo iibin sababtoo ah waxay kaliya diirada saareen ciidaha muhiimka ah ee taariikheed (Black Friday, Cyber ​​Monday, iwm.), Si ka duwan bilowga hore sida kuwa magacyadooda ka fakaray ka hor xirmada.
Ha iloobin dijitaalka - Inta badan dukaamada lebenka iyo madaafiicdu waxay u maleynayaan inay wanaagsan yihiin in la aado maxaa yeelay dadku way helayaan uun, laakiin runta ayaa loo sheegayaa… dukaamaysanayaashu waxay ku sameeyaan baaritaankooda internetka ka hor intaysan u dhaqaaqin inay wax iibsadaan. Haddii aad tahay leben iyo hoobiye ama dukaan internetka ah, in laga helo internetka waa muhiim.
Saameeyayaasha - waa mawjadaha mustaqbalka, iyo habka loo maro marka la qorsheynayo suuqgeynta ciidaada. Qofna ma eegi doono xayeysiisyada banner dambe. Iyo tan ka sii muhiimsan… 200 MMMMillion oo qof ayaa isticmaalaya xannibaadaha xayeysiinta. Marka lacagtaada adag ee shaqa la'aantu waligeed xitaa ma aragto iftiinka maalinta.
Tags: saamaynta dhijitaalka ahsaamaynta dhijitaalka ahfasaxasuuqgeynta fasaxacelintaiibin badaniibso waxyaabo badanshelf